Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Qatar » Qatar Airways dia manitatra ny fitsarana IATA Travel Pass
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Qatar Airways no lasa zotram-piaramanidina voalohany nampifandray mari-pankasitrahana momba ny vaksiny amin'ny fampiharana finday 'Digital Passport'.
Ny fanitarana fanitarana dia ahafahan'ny mpandeha mankao Doha mizara ny taratasy fanamarinana vaksiny navoakan'ny Qatar tamin'ny alàlan'ny findain'izy ireo tamin'ny zotram-piaramanidina sy ireo manampahefana amin'ny fomba azo antoka sy milamina ary azo antoka.
Hodina amina dingana maromaro ny fitsapana, manomboka amin'ny ekipa kabine mitsangantsangana avy any Koety, Londres, Los Angeles, New York, Paris ary Sydney.
Ny Qatar Airways dia manolo-tena amin'ny fampihenana ny antontan-taratasy ary manome traikefa fitetezam-paritany, azo antoka ary milamina kokoa ho an'ireo mpandeha ao aminy.
Qatar Airways manohy mametraka ny mari-pahaizana momba ny fanavaozana, fiarovana ary serivisy ho an'ny mpanjifa, lasa zotram-piaramanidina voalohany hitsarana ny vaksinin'ny vaksinin'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny Iată Fampandehanana finday 'Passport Digital' Mobile App. Rehefa miverina eny amin'ny habakabaka ny mpitsangatsangana dia manolo-tena amin'ny fampihenana ny antontan-taratasy ny zotram-pitaterana an'habakabaka ary manome traikefa fitsangatsanganana tsy misy ifandraisana, azo antoka ary tsy misy tohiny ho an'ireo mpandeha ao aminy.
Hanomboka amin'ny dingana manomboka ny volana jolay ny fitsarana, manomboka amin'ny fiandohan'ny mpiasa an-trano hiverina any Doha mandeha avy any Kuwait, London, Los Angeles, New York, Paris ary Sydney. Ny ekipa kabinina dia afaka mampakatra taratasy fanamarinana vaksinin'ny COVID-19 any Qatar miaraka amin'ny valim-panadinana COVID-19 ho an'ny IATA Travel Pass Mobile App ary hanamarina fa afaka mandeha izy ireo. Rehefa tonga any Doha, ny ekipa dia afaka mizara soa aman-tsara ny taratasy fanamarinana ny vaksiny ary miroso amin'ny fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker dia nilaza fa: "Na eo aza ny fanamby lehibe ateraky ny areti-mandringana dia lasa mpitondra hatrany ny teknolojia sy ny fanavaozana vaovao hahazoana antoka ny fivezivezena azo antoka, azo antoka ary tsy misy tohiny. ho an'ny mpandeha anay. Qatar Airways dia mirehareha mitarika ny làlana amin'ny alalàn'ny kaompaniam-piaramanidina voalohany hanandramana ny fanamarinana vaksinin'ny COVID-19 amin'ny alàlan'ny IATA Travel Pass 'Digital Passport' Mobile App. Tiako indrindra ny misaotra ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka any Qatar, ny Minisiteran'ny Atitany, ny Fikambanana Ifanampiana ara-pahasalamana voalohany ary ny Hamad Medical Corporation, izay raha tsy nisy ny fanohanan'izy ireo dia tsy ho vita io fitsarana io.
“Fantatsika fa rehefa manomboka manomana drafitra hiverina any amin'ny toerana fialan-tsasatra ankafiziny izy ireo, dia tsy maintsy iharan'izy ireo ny fanamby hiantohana fa manana taratasy ara-taratasy mety izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fitsapana sy fanohanana ny fampandrosoana teknolojia vaovao, mikendry ny hanome fitaovana ho an'ireo mpandeha an-tany izahay izay hanampy azy ireo hamakivaky ny sisin-tany miaraka amin'ny fahatokisan-tena bebe kokoa. ”
Willie Walsh, Tale Jeneralin'ny IATA dia nilaza: “Ny Qatar Airways sy ny governemanta Qatari dia mampiseho fahaiza-mitarika amin'ny fananganana voalohany ny fanamarinana ny taratasy fahazoan-dàlan'ny vaksinin'ny mpandeha amin'ny alàlan'ny IATA Travel Pass. Ny mari-pankasitrahana momba ny vaksiny COVID-19 na ny fizahana fizahan-toetra dia lakilen'ny famerenana amin'ny laoniny ny fahalalahan'ny olona mandeha. Ny fitsapana nataon'ny Qatar Airways sy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 70 hafa dia nanaporofo fa ny IATA Travel Pass dia afaka mitantana ny valin'ny fitsapana. Ity fitsapana vaovao lehibe ity izay mifantoka amin'ny satan'ny vaksiny dia hampiorina bebe kokoa ny fahatokisana ny IATA Travel Pass ho vahaolana feno ho an'ireo mpandeha, governemanta ary orinasam-pitaterana an'habakabaka. "